Homeसमाचारखुल्यो ड’रलाग्दो र’हस्य ‘मेरो श्रीमानलाई ईण्डियामा बेच्यो’ भन्दै श्रीमती आइन् (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 28, 2021 admin समाचार 4721
काम गरेर पैसा कमाउन भन्दै हिडेका छोरालाई आमाले फोन गरिन्? तँ कहाँ छन् माइ’ला भनेर सोधिन् । छोराले भने, आमा म कहाँ छु मलाई नै थाहा छैन । मलाई ल्याउने मान्छे त साह्रै ख’राब रैछ । यो वोली नै आमाका लागि छोराको अ’न्तिम बोली बन्यो । ताप्लेजुगंका मनोज झापाको एक जंगलमा नि’धन भएको अवस्थामा फे’ला परे ।
उनलाई आफ्नै वाजे पर्ने सुर्य लिम्बुले मा र्न ला गेका छन् भनेर म्या’सेज गरे । परिवारको भनाई छ, नि’धन भइसकेका छोराले कसरी म्यासेज गरे? यो सबै सुर्यको चा’ल हो । उनले नै काम लगाइदिन्छु भन्दै लिएर हिँडेका थिए । धरानमा काम गरिरहेका छोरालाई काठमाडौमा राम्रो काम पाइन्छ म काममा लगा’इदिन्छु भन्दै हजुरवुवाले लिएर हिडेका थिए ।
ताप्लेजुङ तिरु’ङगा निबासि २१ बर्षे मनोज इजम लिम्बु हराएको लामो समय भयो । उनलाई गाउँकै हजुरवुवाले काठ’माडौ काम लगाइदिन्छु भनेर लिएर हिँडेका थिए । धरानमा काम गर्न भनेर गएको युवकलाई काकाबाजेले धरा’नमा राम्रो पैसा पाइन्न, म काठमाडौमा राम्रो काम लगा’इदिन्छु भनेर लिएर गएको आफुले थाहा पाएको माइ’जुले बताइन् ।
घट’ना भएको साढे २ घण्टा पछि आफुहरुले थाहा पाएको बताइन् । युवकको आमाको मोवाइलमा अनौ’ठो म्यासेज आयो । मलाई जंगलमा ल्या’एका छन् भन्दै लेखिएको छ । गत बुधबार दिउसो करिब १ बजे झापाको दोमुखा देखि उत्तर इलामको घना जङगलमा झु’ न्डा ए र मा रे ‘को आ_संका परिवारले गरेका छन । मलाई मा ‘रे भन्दै आमाको मोवाइलमा म्या’सेज आएको थियो ।
जसको नि’धन भयो उसैले मलाई मा ‘रे भनेर म्यासेज गर्छ, युवकको माइजु भन्छिन्, ताप्लेजुङ्गकाइ एकजना गाउले बाजेले काठमान्डौ जागिर लगाइ दिन्छु भनेर मा’वली घरबाट धरान बोलाएका थिए ।
त्यसपछि गएको मङगलबार उहाको साथिहरुसङग धरा’नमा पार्टी खाएको र भोलि पल्ट बिहान ३ बजे नै बाजे संगै काठमाडौँ हिडेको मान्छे कहिले फ’र्किएनन । बुधबार १ बजे मृ त कको आ’मालाई एउटा म्यासेज गएको थियो । त्यो म्यासेजमा अब म आउ’दिन म बाच्न सक्दिन भनेर मृ ‘त कको फोन बाट आमालाई ग’एको थियो । – इताजा खबरबाट
June 10, 2021 admin समाचार 4464
January 15, 2021 admin समाचार 6440
August 20, 2020 admin समाचार 38321